विश्व व्यापारको खेल
अमेरिका र चीनबीचको व्यापार विवाद चर्कंदो छ । स्टिल र आल्म्युनियमको कर लगाएपछि अमेरिकी प्रशासनले दशकौंदेखि बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीलाई दण्डित गर्ने भन्दै १ हजार ३ सय ३३ वस्तुमा २५ प्रतिशत कर लगाउने योजना बनाएको छ । चीनले अमेरिकी वस्तुमा २५ प्रतिशत कर लगाउने जवाफी कारबाही अगाडि बढाएको छ ।
अर्थशास्त्र नबुझेका अर्थमन्त्री भोग्दै आएका तथा आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास सन्तोषजनक नभएको अनुभव गर्दै आएका धेरै नेपालीले वर्तमान मन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थविद्समेत भएको हुनाले उनको कार्यकालमा देशमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने र आर्थिक विकास विस्तार हुने अनुमान गरेका छन् ।
विकास र समृद्धिको बाटो कुन ?
यसपटकको चुनावमा वाम गठबन्धनको जितका निम्ति नाकाबन्दीमा निर्माण भएको ओलीको राष्ट्रवादी छवि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ भन्नेमा सबैंको एकमत देखियो । त्यसो त दुई ठूला वाम एमाले र माकेको भोट एक्कै ठाममा जोड्दा पनि निकट प्रतिस्पर्धी दल नेकाभन्दा अगाडि आउन सहज भएको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क–दिक्क भएका जनतालाई पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकारका लागि पनि मतदाताले गठबन्धनलाई छानेको हो ।
प्रदेश १ को समृद्धिका आधार
संघीय संरचनाअनुसार १ नं प्रदेशले सिंगो नेपालको विशेषता बोकेको छ । जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक र पर्यावरणीय आधारमा यो प्रदेशमा विविधता छ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा र नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग केचनाकलन यही प्रदेशमा छन् । नेपालकै सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका तथा २८ प्रजातिका गुराँस पाइने प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र यही प्रदेशमा अवस्थित छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरताको मार्ग पहिचान
कृषिमा आत्मनिर्भरताको मार्ग पहिचान केशव समर्पण हेटौंडा, २४ चैत प्रदेश नम्बर ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ । मन्त्रालयले प्रारम्भिक खाकामा दिगो भूमि व्यवस्थापन, कृषि र सहकारीका माध्यमबाट प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइ उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
म्युचुअल फन्ड : लगानी व्यवस्थापनमा असक्षम र अपारदर्शी
दक्ष लगानी व्यवस्थापनमार्फत् जोखिम न्यूनीकरण गरी सहभागीलाई उच्चतम प्रतिफल दिलाउनु सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को आधारभूत सिद्धान्त हो । व्यक्तिगत वा म्युचुअल फन्डको लगानीमा अधिकतम नाफा प्रमुख उद्देश्य भए पनि जोखिम व्यवस्थापनका हिसाबले भिन्नता हुन्छ ।
श्वेतपत्रमा देखिएको आहत अर्थतन्त्रको तस्विर
डा.युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत् बडो फुर्तीका साथ सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै अर्थतन्त्रका जोखिम सार्वजनिक गरेका छन् । ढुकुटी रित्याउन अघिल्लो सरकारको मात्र दोष हो भन्ने उनको आशय प्रष्ट देखिन्छ । अर्थतन्त्रको तस्बिर अर्थात् तथ्यांकहरू पस्किनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, नकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरूलाई सुधार्न लिइने नीतिहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन । तर, योजना कतै सुन्न पाइएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर, राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख पदको जिम्मेवारी लिइसकेका उनले विगतमा के गरे नेपालीहरूले मूल्यांकन गरेकै छन् ।
वैदेशिक लगानीका व्यवधान
सर्वसाधारणका माझ साख गुमाएको एकाध कम्पनीबाहेक कुनै जलविद्युत् आयोजनाले प्रारम्भिक सेयर जारी गर्दा आह्वान गरेभन्दा कैयन् गुणा बढी आवेदन पर्नुले मुलुकभित्रै राज्यलाई चाहिने लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त छ भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । तर, सबै लगानीकर्तालाई एकैचोटी उनीहरूले चाहेको आयोजनामा सकेजति सेयरमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन सक्ने हो भने मात्र हामीसँग मौज्दात रहेको पुँजीको सही आकलन गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो ।
वित्तीय जनशक्तिको जोखिम र व्यवस्थापन
हालका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूमा ठगी र अनियमितता गर्ने क्रममा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निहित जनशक्तिसँग सम्बन्धित जोखिम (अख्तियारको दुरुपयोग र अनियमितता) व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका सम्भावित उपायहरूका बारेमा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।
बजेटको आकार घटाऔं
सरकारले राज्यको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न र राष्ट्र निर्माणका आधारहरू खडा गर्न प्रत्येक वर्ष अनुमानित आय र व्ययको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने गर्छ । विकासशील राष्ट्रहरूले समृद्धितर्फ उडान लिँदै गर्दा सार्वजनिक खर्च बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने धेरैजसो राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा विकासविद्हरूको मान्यता हुन्छ ।